"Sambatra izay manasa ny akanjony, mba hananany fahefana amin'ny hazon'aina sy hidirany amin' ny vavahady ho ao an-tanàna" - Apôk. 22:14.
Manasa antsika hitazana ilay tontolo tsara lavitra i Kristy. Asehony amintsika ny tombontsoan'ny maha-mponina any amin'ilay tanàna izay Andriamanitra no mpanorina sy mpanao azy. Entiny eo an-tsisin-tanin'ny mandrakizay isika, dia asehony amintsika ny voninahiny. Ary ambarany fa ho an'ireo izay manaiky ny hiaina araka ny lalàn'Andriamanitra izany. Afaka ny ho tafakambana ho iray amin'ny alalan'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra ny taranak'olombelona. Dia ho ankohonana iray hiara-tsambatra ao amin'ilay tanànan 'Andriamanitra izy ireo. Tsy misy toerana kosa ho an'ireo izay manao tsinontsinona ny sitrapon'Andriamanitra anefa any. Afaka mahazo ny fiainana mandrakizay izay rehetra maniry izany. Mba hahazoany izany anefa dia tsy maintsy ekeny ho mpitari-dalana azy eo amin'ny fiainany ny lalàn'Andriamanitra, ka tsy hiezaka hanao izay tiany izy ireo (...) Ireo izay misafidy ny hiaina amin'ny fiainana mifandrindra amin'ny sitrapon'ny Ray no handrotsahan'i Kristy ny fahatsaran'ny fiainany. — Ms, 49, 1907 Ataonareo va fa hanjonitra sy halahelo ireo mpitandrina ny didy raha hivoha ny vavahady perila manjelatra mankao amin'ilay tanàna volamena, ka harahabaina tonga soa hiditra ao izy ireo? Sanatria izany. Hifaly izy ireo amin'izany, satria tsy eo ambanin'ny fanagejan'ny lalàna izy ireo, fa nitandrina ny lalàn'Andriamanitra, ka afaka amin'izany. Hanana anjara amin'ny hazon'aina izy ireo, sy amin'ny raviny izay fanasitranana. — RH, 10 Jona 1852
Nandidy fitahiana ho an'ireo izay mitandrina ny lalàny ilay Andriamanitry ny lanitra. — SDABC 1:1104 Izay nahatoky tamin'ny zavatra "kely" teto an-tany dia hotendrena ho mpanapaka ny "be" any amin'ilay tontolo be voninahitra mandrakizay. — GCB, 01 Oktôbra 1899.